ကလေး၏ ဝမ်းဗိုက် လေအောင့်မှုကို တိုက်ထုတ်ခြင်း ￼ – Similac
ကလေး၏ ဝမ်းဗိုက် လေအောင့်မှုကို တိုက်ထုတ်ခြင်း ￼
သင့်ကလေး၏ ဝမ်းဗိုက်အတွင်းသို့ လေဝင်နိုင်သည့် အကြောင်းအရာများစွာ ရှိသောကြောင့် တစ်နေ့လျှင် ၁၃ ကြိမ်မှ ၂၁ ကြမ်အထိ လေလည်လေ့ရှိခြင်းမှာ ပုံမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ အစာခြေစနစ်လည်း ဖွံ့ဖြိုးနေသောကြောင့် အစာမကြေခြင်း သို့မဟုတ် အစားအစာ အမှားမခံခြင်းသည် သင့်ကလေးကို ဝမ်းဗိုက်လေအောင့်ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့၏ အပြည့်အဝမဖွံ့ဖြိုးသေးသော အစာခြေစနစ်သည် အစားအစာများကို မြန်မြန် ဖြတ်သန်းစေသောကြောင့် အစာများသည် အပြည့်အဝမကြေနိုင်ပါ။1,2
အကယ်၍ အစားအစာအပေါ်တွင် အမှားမခံခြင်းသည် ဝမ်းဗိုက်လေအောင့်ခြင်း၏ အဓိက အကြောင်းအရာဖြစ်ပါက ၎င်းတို့အား လေ ပိုပွစေနိုင်သည့် အစားအစာများအကြောင်းကို သင့်ကလေး၏ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ကလေးများတွင် ဝမ်းဗိုက်လေထိုးခြင်း သက်သာစေရန် အသုံးများသော ကုထုံးများ
စိတ်မကြည်ခြင်း သို့မဟုတ် သက်တောင့်သက်သာ မဖြစ်သော ကလေးအား သက်သာအောင် လုပ်ပေးခြင်းသည် မိဘများအတွက် စိန်ခေါ်မှု တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကလေးများ ဝမ်းဗိုက်လေအောင့်သည့်အခါတွင် အောက်ပါအချက် များသည် ကလေးများကို သက်သာစေနိုင်ပါသည်။2
ဝမ်းဗိုက် နှိပ်နယ်ပေးခြင်းနှင့် ဝမ်းဗိုက်လှုပ်ရှားမှုများ – ဝမ်းဗိုက်ကို ညှင်သာစွာ နှိပ်နယ်ပြီး သင့်ကလေး၏ ပခုံး၊ ကျောနှင့် ခြေထောက်များဆီသို့ လမ်းကြောင်းအတိုင်းနှိပ်နယ်ပေးပါ။ ထိုသို့ နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာ နှိပ်နယ်ပေးမှုသည် ၎င်းအား သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေပြီး လေများ ထွက်သွားရန် ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။ သင့်ကလေးကို မှောက်လျက် ထားခြင်းဖြင့် ကစားခိုင်းခြင်းသည် ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားများကို သန်မာစေပါသည်။ မနက်အိပ်ရာ နိုးသည်နှင့် ထိုနည်းလမ်းအတိုင်းပြုလုပ်ပါ။2
အောက်တွင် အစာကြေလွယ်သောနည်းလမ်းများကို ဖော်ပြထားပါသည်။4
နို့ပါဝင်မှုနည်းသော သို့မဟုတ် နို့မပါဝင်ခြင်း ။ နို့နှင့်ဓာတ်မတည့်သောကလေးများအတွက် နို့ပါဝင်မှုနည်းသော သို့မဟုတ် နို့မပါဝင်သော ဖော်မြူလာသည် ဝမ်းဗိုက်လေအောင့်ခြင်းနှင့် ဝမ်းရည်ကျဲကျဲ သွားခြင်း လက္ခဏာများကို သက်သာစေပါသည်။
ပရီဘိုင်အိုတစ်များပါဝင်ခြင်း ။ ပရီဘိုင်အိုတစ်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အစာခြေလမ်းကြောင်းတွင် ကောင်းမွန်သော အူလမ်းကြောင်းဘက်တီးရီးယားများ ကြီးထွားမှုကို အားပေးပါသည်။ ၎င်းသည် အန္တရာယ်ရှိသော ဘက်တီးရီးယားများ ကြီးထွားမှုကို တားဆီးပေးပြီး ကျန်းမာသော အူလမ်းကြောင်းကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ကူညီပေးပါသည်။
စားအုန်းဆီမပါဝင်ဘဲ ကလေးများအတွက် ထုတ်ထားသောဖော်မြူလာ
စားအုန်းဆီမပါဝင်သည့် ဖော်မြူလာကို ရှာဖွေပါ။ လေ့လာမှုများအရ စားအုန်းဆီပါဝင်သော ဖော်မြူလာကို တိုက်ကျွေးသော ကလေးများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက စားအုန်းဆီမပါဝင်သော ဖော်မြူလာကို တိုက်ကျွေးသော ကလေးများသည် ဝမ်း ပိုမိုပျော့ပြောင်းပြီး ကယ်လ်စီယမ် စုပ်ယူမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။
ကလေးများကို ပျော်ရွှင်စေခြင်းသည် မိဘများ၏ ဦးစားပေးဖြစ်သည်။ မိဘများ အနေဖြင့် မိမိတို့ စိတ်ခံစား သိရှိမှုကို ယုံကြည်ပြီး သင့်ကလေးအတွက် လိုအပ်သော စောင့်ရှောက်မှု နည်းလမ်းများကို သတိပြုပါ။ အစားအသောက်ရွေးချယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြည့်စွက်စာများကို ရွေးချယ်မှုသည် ကြီးထွားလာသောကလေး၏ အာဟာရလိုအပ်ချက်များ အထူးသဖြင့် ဦးနှောက်၊ မျက်လုံးနှင့် ခုခံအားစနစ်တို့ကို လုံလောက်စွာထောက်ပံ့ပေးသင့်ပါသည်။
Similac Toal Comfort Growing-Up Milk သည် ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ လေပွခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ကြေးများခြင်းနှင့် နို့နှင့် ဓာတ်မတည့်သော နို့စို့အရွယ် ၂ နှစ်နှင့်အထက် ကလေးများအတွက် အလွယ်တကူအစာကြေပြီး စုပ်ယူနိုင်သော အာဟာရဖော်မြူလာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခုခံအား စနစ် မြှင့်တင်ရန် 2’FL HMO နှင့် Nucleotides ပါဝင်သည်။3 ၎င်းတွင် ဗီတာမင် A, B12, C, D, Folic Acid, သံဓာတ်၊ ဆီလီနီယမ် နှင့် ဇင့်တို့ပါဝင်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးဆဲ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ကူညီ ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။
ကိုးကားချက် – Borschel et al. (2012); 2. Borschel et al. (2014); 3.Buck R et al. 2004, Schaller et al 2004,